अन्लाईन घर लिस्टिङ गर्न, अपनाउनु पर्ने १० जरुरी उपायहरु | Basobaas
अन्लाईन घर लिस्टिङ गर्न, अपनाउनु पर्ने १० जरुरी उपायहरु
घर बेच्न लिस्टिङ्ग गर्नु अगाडी धेरै कुराको ख्याल गर्नु पर्नेहुन्छ । जब घर आकर्षक देखिन्छ तब मात्र बिक्रि हुने सम्भावना बढेर जान्छ।
यस लेखमा घर बेच्न लिस्टिङ्ग गर्नु अगाडी के के गर्नु पर्छ बन्ने बिषयमा १० वटा टिप्सहरुको चर्चा गर्छौ ।
१. किचन घरको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कोठा हो। यसमा भएका केहि खराबीलाई सुधार्नु पर्छ । यदि किचन अध्यारो छ भने त्यसमा बत्ति जोडेर उज्यालो पार्नु पर्छ,रंग रोगन गरि उज्यालो र सफा भान्छा राख्न आकर्षणका लागि उचित हुन्छ ।
२.घर बेच्न लिस्टिङ्ग गर्नु अगाडी घरमा रंग लगाउनु पर्छ । तपाइको घर राम्रो भएपनि कहिले कहिले रंगले गर्दा पुरानो र नराम्रो देखिन सक्छ त्यसैले घर बेच्नु अगाडी घरको पेंटिंग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३.सिलिङ्गमा आकर्षक झुमर र घरमा अरु बत्ति जडान गर्नु होस् र पुराना बत्तिहरु हटाउनुहोस् । यसले गर्दा घर नयाँ र आधुनिक देखिन्छ।
४. भुईवाट पुरानो कार्पेट हटाउनु होस् र राम्रोसँग सफा गर्नुहोस। भुईमा कहिँ कतै चर्किएको वा फुटेको छ भने मर्मत गर्नुहोस् ।
५, आवश्यक ठाउमा नयाँ डिजाइनको कार्पेट र टायल जडान गर्नुहोस। कार्पेट हाल्दा धेरै ख्याल गर्नुहोस । पक्का गर्नुहोस घर किन्ने मान्छेलाई राम्रो लाग्ने छ ।
६. घरको ठाउँ-ठाउँमा ऐना प्रयोग गर्नुहोस। यसले घर क्षेत्रफ़ल अझै ठुलो देखाउछ ।
७. पुराना भएका सिसा र ऐना घरवाट निकाल्नुहोस। यसरी पुरानो ऐना हटाउदा घर सफा र नयाँ देखिन्छ।
८. बाथरूम कस्तो छ?? विचार गर्नुहोस। यदि भण्डारणको कमि भए थप्नुहोस । केहि पुराना डजाईनका सामान हटाएर नयाँ राख्नुहोस ।
९.बैठक कोठा अहिलेको समयमा सबै भन्दा महत्वपुर्ण छ त्यसैले यसलाई सजाउनुहोस र केहि नया स्वरुप दिनुहोस ।यसमा पर्दा लामो र आकर्षक राख्नुहोस। बत्तिलाई पनि बिशेष याद गर्नुहोस। आध्याँरो छ भने अझै बत्ति थप्नुहोस ।
१०: Basobaas.com वेबसाइटमा जानुहोस र घर लिस्टिङ्ग गर्नुहोस ।बसोवास नेपालको एउटा अग्रणी अनलाइन रियल इस्टेट बजार हो, जसले हाल काठमाडौं, पोखरा र देशभर बेच्नको लागि हजारौं सम्पत्ति बिक्री र भाडामा दिनको लागि सूचीबद्ध गर्दछ। नेपालमा बस्नको लागि नयाँ ठाउँ फेला पार्न हजारौं नेपालीहरू बसोवास .कम मा (Basobaas.com) प्रत्येक दिन जोडिने गर्छन । ग्रामीण क्षेत्रको सूचीदेखि नयाँ सम्पत्ती विकास र निर्माणसम्म, सबै कुरा सूचीबद्ध वा लिस्टिङ्ग गर्दछ।
आशा छ तपाइलाई यो लेख मनपर्यो ।
पढेर साथ दिएकोमा धन्यावाद !!